Warning (2021) – Burmese Subtitle
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Warning ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် IMDB rating5အထိရရှိထားပြီးတော့ running time 1 hr 20 min ကြာတဲ့ဒီကားလေးရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ တစ်ခြား ဇာတ်ကားတွေလို အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ခုမပါ၀င်ပဲ ဖြစ်တည်လာတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုရိုက်ကူးပြထားတာပါ .
ဒါကတော့အနာဂတ်ခေတ်တစ်ချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ကို အန္တရာယ်တစ်ခုကျရောက်လာတဲ့အခါလူတွေရဲ့နေ့စဥ်ဘဝတွေအပေါ်သက်ရောက်ပုံကို သရုပ်ဖော်ရိုက်ကူးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
. ဂြိုလ်တုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေရင်း မတော်တဆကြောင့် အာကာသထဲလွင့်ထွက်သွားတဲ့ အာကာသယာဥ်မှူးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သီးခြားဇာတ်ကောင်တွေကိုယ်စီရဲ့ အချစ်ရေး ဘာသာရေး စတဲ့ကိစ္စတွေ ကိုခေတ်မှီတဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းဖြစ်တည်နေပုံအဖြစ်ရိုက်ကူးပြထားတာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာကမင်းသားဘယ်လိုဟ မင်းသမီးကဘယ်လိုဆိုတာမျိုးမရှိပဲ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုချင်းရဲ့ ဇာတ်၀င်ခန်းတွေကိုရိုက်ကူးပြသွားရင်း ကြည့်ရှုရမယ့်ကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချပြီးပြောရရင် Sci-fi ကားမျိုးကိုကြိုက်သူတွေ၊ ဇာတ်လမ်းကိုစဉ်းစားရင်းကြည့်သွားရမယ့်ကားမျိုးကြိုက်တဲ့သူတွေ အလှည့်အပြောင်းနဲ့မှ ခံစားတက်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ MK ပဲဖြစ်ပါတယ်
IMDb Rating 5.4 3,911 votes
Download GDrive 720p 666.53 MB
Download OneDrive 720p 666.53 MB
Download Mega 720p 666.53 MB
Download Mediafire 720p 666.53 MB
Download TeraBox 720p 666.53 MB
Download GDrive 1080p 2.34 GB
Download OneDrive 1080p 2.34 GB
Download Mega 1080p 2.34 GB
Download Mediafire 1080p 2.34 GB
Download TeraBox 1080p 2.34 GB